Home News Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo Weeraray Khudbadi Maanta uu Jeediyay Madaxweyne Farmaajo
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo ka hadlay Khudbada madaxweynaha Farmaajo maanta ka jeediyay munaasabada furitaanka kala fadhiga saddexaad ee Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan faah faahin buuxda ka bixin xaaladda dalka ka taagan iyo Arrinta muranka badan dhalisay ee Heshiiskii saddex Geesoodka ahaa ee Ber bera.
WAA KAN QORALKA UU FACEBOOK SO DHIGAY SIYASIGA:
Inkasta uu marar badan hadalka ka istaagay, Khudbada Madaxweyne Farmaajo uu labada Aqal maanta ka hor jeediyey ma ahayn mid isku xiran, dheelitiran, biyadhacna leh. Kamana uusan hadal
1-Sanadkii tegey wixii ina soo maray 2- Nooma tilmaamin halka aan u socono 3- Sooma na qaadin Arrimaha xasaasiga ee taagan. Madaxweynuhu wuxuu ka digay in dalkeena lagu soo xadgudbo ee ma sheegin in xadgudub dhacay oo laga xisaabtamayo.
Maadaama uusan madaxweynuhu mowqifkiisa cadaynin, haddii shacabka beri loo sheego in Golaha Wasiirada ay go’aan soo saareen, waxaan u qaadanaynaa in madaxweynuhu mar kale masuuliyadisii gabay.